“2018 Seoul International Drama” ဆုပေးပွဲမှာ သူတို့တွေလည်းဆုကိုယ်စီရခဲ့သတဲ့ 😍💕 – Trend.com.mm
“2018 Seoul International Drama” ဆုပေးပွဲမှာ သူတို့တွေလည်းဆုကိုယ်စီရခဲ့သတဲ့ 😍💕
အနုပညာရှင်တွေအတွက်ပန်းတိုင်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတဲ့ 2018 Seoul International Drama Awards ဆုပေးပွဲကြီးကို စက်တင်ဘာ ၃ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆုပေးပွဲကြီးဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက အကောင်းဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲတွေ၊အကောင်းဆုံးမင်းသားမင်းသမီးတွေရွေးချယ်တဲ့ပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကြီးကို KBS Hall မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေကတော့ Jun Hyun Moo နဲ့ Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင်Sooyoung ပါ။
ဒီနှစ်ရဲ့ Seoul International Drama Awards ဆုပေးပွဲမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၅၆ နိုင်ငံက တင်သွင်းပြသထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲပေါင်း ၂၆၈ ခုတောင်ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ 😮ဆုပေးပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် အများဆုံးပမာဏလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဇာတ်လမ်းတွဲတွေများစွာကြားထဲမှာ Grand Prize ဆုကိုရရှိခဲ့တာကတော့ဂျာမန်ဇာတ်လမ်းတွဲ “Babylon Berlin” ပါ။ဇာတ်လမ်းတိုအတွက် Top Excellence Award ဆုကိုတော့ Germany’s non-fiction ဒရာမာဖြစ်တဲ့“54 Hours”က ရရှိခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာကတော့ “54 Hours”ရိုက်ကူးခဲ့သူ Kilian Riedhoff ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်တဲ့ “Candice Renoir” ကတော့ Top Excellence Award ဆုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေအတွက်လည်းမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒီပွဲကြီးမှာ မီနီစီးရီးဖြစ်တဲ့ “Mother” ဇာတ်လမ်းတွဲကTop Excellence Award ဆုရရှိခဲ့ပြီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ မင်းသမီးချော Lee Bo Young က အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်😍 နိုင်ငံတကာပရိသတ်တွေကြားထဲ နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ “While You Were Sleeping” ဇာတ်လမ်းတွဲကTop Excellence Award ဆုရရှိခဲ့ပြီး “Fight My Way” နဲ့ “Pretty Noona Who Buys Me Food” ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ Excellence Award ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနိုင်ငံတကာပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစားခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေအတွက် အကောင်းဆုံးမင်းသား၊မင်းသမီးဆုကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့မင်းသားချော Park Seo Joon နဲ့ Son Ye Jin တို့က ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် 😍😍တောင်ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ဆုတွေပါပဲ။Congratulations to all the winners! 🎉🎉🎉ဆုပေးပွဲပုံရိပ်တစ်ချို့ကိုပါ ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အနုပညာရှငျတှအေတှကျပနျးတိုငျတဈခုလို့ပွောလို့ရတဲ့ 2018 Seoul International Drama Awards ဆုပေးပှဲကွီးကို စကျတငျဘာ ၃ရကျနကေ့ကငျြးပခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။ဒီဆုပေးပှဲကွီးဟာ ကမ်ဘာတဈဝနျးလုံးက အကောငျးဆုံးဇာတျလမျးတှဲတှေ၊အကောငျးဆုံးမငျးသားမငျးသမီးတှရှေေးခယျြတဲ့ပှဲကွီးပဲဖွဈပါတယျ။ဒီပှဲကွီးကို KBS Hall မှာ ပွုလုပျခဲ့တာဖွဈပွီး အစီအစဉျတငျဆကျသူတှကေတော့ Jun Hyun Moo နဲ့ Girls’ Generation အဖှဲ့ဝငျSooyoung ပါ။
ဒီနှဈရဲ့ Seoul International Drama Awards ဆုပေးပှဲမှာ နိုငျငံပေါငျး ၅၆ နိုငျငံက တငျသှငျးပွသထားတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲပေါငျး ၂၆၈ ခုတောငျရှိခဲ့ပါတယျတဲ့ 😮ဆုပေးပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ အမြားဆုံးပမာဏလညျးဖွဈပါတယျ။နိုငျငံတကာဇာတျလမျးတှဲတှမြေားစှာကွားထဲမှာ Grand Prize ဆုကိုရရှိခဲ့တာကတော့ဂြာမနျဇာတျလမျးတှဲ “Babylon Berlin” ပါ။ဇာတျလမျးတိုအတှကျ Top Excellence Award ဆုကိုတော့ Germany’s non-fiction ဒရာမာဖွဈတဲ့“54 Hours”က ရရှိခဲ့ပါတယျ။အကောငျးဆုံးဒါရိုကျတာကတော့ “54 Hours”ရိုကျကူးခဲ့သူ Kilian Riedhoff ပဲဖွဈပါတယျ။ပွငျသဈဇာတျလမျးတှဲဖွဈတဲ့ “Candice Renoir” ကတော့ Top Excellence Award ဆုရရှိခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။
တောငျကိုရီးယားအနုပညာရှငျတှအေတှကျလညျးမှတျတိုငျတဈခုဖွဈတဲ့ ဒီပှဲကွီးမှာ မီနီစီးရီးဖွဈတဲ့ “Mother” ဇာတျလမျးတှဲကTop Excellence Award ဆုရရှိခဲ့ပွီး ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သူ မငျးသမီးခြော Lee Bo Young က အကောငျးဆုံးမငျးသမီးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယျ😍 နိုငျငံတကာပရိသတျတှကွေားထဲ နာမညျကြျောကွားခဲ့တဲ့ ဇာတျကားတှကေို ရှေးခယျြခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ “While You Were Sleeping” ဇာတျလမျးတှဲကTop Excellence Award ဆုရရှိခဲ့ပွီး “Fight My Way” နဲ့ “Pretty Noona Who Buys Me Food” ဇာတျလမျးတှဲဟာ Excellence Award ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယျ။
ဒီလိုနိုငျငံတကာပရိသတျတှကွေားရပေနျးစားခဲ့တဲ့ဇာတျလမျးတှဲတှအေတှကျ အကောငျးဆုံးမငျးသား၊မငျးသမီးဆုကိုရှေးခယျြခဲ့တဲ့အခါမှာတော့မငျးသားခြော Park Seo Joon နဲ့ Son Ye Jin တို့က ရရှိခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ 😍😍တောငျကိုရီးယားအနုပညာရှငျတှအေတှကျ ထိုကျတနျတဲ့ဆုတှပေါပဲ။Congratulations to all the winners! 🎉🎉🎉ဆုပေးပှဲပုံရိပျတဈခြို့ကိုပါ ပွနျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
သင်တုန်းဓားမသုံးပဲ Armpit Hair တွေကို ဒီလိုဖြေရှင်းမယ်